Waa kuma ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay agagaarka madaxtooyadda Soomaaliya? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Waa kuma ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay agagaarka madaxtooyadda Soomaaliya?
Waxaa maalintii shalay warbaahinta ku hadasha afka Al-shabaab ee Al-Andulus lagu baahiyay cod laga duubay ninkii dadkii badanaa ku laayay hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho, halkaas oo maalintii talaadada ahayd dad badani dhaawac iyo dhimasho kasoo gaartay.
Ninkaan oo magaciisa lagu sheegay Shukri C/laahi Diiriye (Jaabir) islamarkaana 44 jir ahaa ayaa sida la sheegay ku dhashay deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo, wuxuuna ahaa aabe 44 jir ah, isla-markaana kasoo jeeda beesha Mareexaan.
Ninkaan ayaa sida la sheegay muddo dheer kasoo bar-bar dagaalamaayay Al-shabaab, iyadoo caruurtiisa kuwa qaangaarka ah uu dagaalka kusoo biiriyay, halka kuwa aan weli qaan-gaarina uu kula dar-daarmay, kolka ay soo bar-baraan inay iska xaadiriyaan xeryaha lagu tababaro maleeshiyada Al-shabaab.
Shukri C/laahi Diiriye oo Shabaabka dhexdiisa looga yeeri jiray (Jaabir), ayaa tallaabada uu naftiisa ku haligay ku sheegay, sidii uu ugu gar-gaari lahaa diinta Islaamka, ka dib markii uu arkay sida uu sheegay in gaaladu ay dhibaato ku hayso dadka muslimiinta ah.
Jaabir, ayaa beesha uu ka dhashay ugu baaqay in marka hore ay Alle ka cabsato, marka xigtana uu ugu baaqaayo in ay kor u qaaddo shareecada Islaamka.
Ninkaan ayaa weerarka ismiidaaminta waxa uu adeegsaday gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray, waxaana uu si xoog leh kusoo jiiray bar-kontrool oo ku taala agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, waxaana gaariga uu watay ku dhuftay xeynaabka hoteelka SYL oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Ninkaan ayaa u muuqday inuu ku qanacsan yahay xasuuqa dadka maatida ah, iyadoo aysan ka muuqan wax jixin-jix iyo naxariis toona, waxaana uu bogaadinayaa in la gumaado umadda muslimiinta ee Soomaaliyeed.
Dhinca kale, afhayeenka guud ee Al-shabaab Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa maalin kahor ku hanjabay in mintidiinta Al-shabaab ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah Hoteelada magaalada Muqdisho.
Wuxuu Cali Dheere dadka reer Muqdisho uga digay inay tagaan xarumaha dowladda Soomaaliya, si aanay waxyeelo uga soo gaarin weerarada ay ku hayaan, wuxuuna carabka ku adkeeyay inaanay iyagu rabin in shacab ku wax-yeeloobaan weeraradooda.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkii dhawaan ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa waxaa ku geeriyootay tiro ku dhaw 30 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacantay in ka badan 50 qof, kuwaasoo u badnaa askar iyo dad rayid ah oo goobta uu qaraxa ka dhacay ka dhawaa, waxaana sidoo kale dhaawacyo fudud soo gaaray wasiiro, xildhibaano, wariyeyaal iyo dad kale oo ku sugnaa gudaha hoteelka SYL iyo dhismeyaasha ku dhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay.
First direct flight from Mogadishu lands at JKIA after 10 years suspension